Ilay Mpanjaka vao teraka - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2022-01 > Ny mpanjaka vao teraka
Ao anatin’ny vanim-potoanan’ny fanasana ny Kristianina maneran-tany hankalaza ny Mpanjakan’ny mpanjaka isika, toy ny nataon’ny olon-kendry tany atsinanana: «Fa hatramin’ny nahaterahan’i Jesosy tao Betlehema any Jodia tamin’ny andron’i Heroda mpanjaka, indreo, misy olon-kendry avy any an-danitra. Ary tonga tany Jerosalema ny atsinanana ka nanao hoe: Aiza ny Mpanjakan'ny Jiosy vao teraka? Efa hitanay niposaka ny kintanany, ka tonga hiankohoka eo anatrehany izahay » (Mat 2,1-2).
Tena zava-dehibe tokoa ny fampidirana ny Jentilisa ao amin’ny fitantaran’ny filazantsara i Matio satria fantany fa tsy ho an’ny Jiosy ihany no nahatongavan’i Jesosy fa ho an’izao tontolo izao. Tsy teraka niaraka tamin’ny fanantenana ny ho mpanjaka indray andro any, fa teraka ho mpanjaka. Noho izany, ny fahaterahany dia loza mitatao ho an’i Heroda Mpanjaka. Ny fiainan’i Jesosy dia manomboka amin’ny fifandraisan’ireo olon-kendry jentilisa izay mivavaka sy manaiky an’i Jesosy ho Mpanjaka. Taloha kelin’ny nahafatesany, dia nentina teo anatrehan’ny governora i Jesosy; ary ny governora nanontany Azy hoe: Hianao va no Mpanjakan'ny Jiosy? Fa hoy Jesosy: Voalazanao » (Matio 27,11).
Na iza na iza nandalo ny havoanan’i Golgota ka nahita ny hazofijaliana nitsangana tamin’ny fanomboana an’i Jesosy dia afaka namaky teo amin’ny takela-pahatsiarovana lehibe teo ambonin’ny lohan’i Jesosy hoe: “Jesosy avy any Nazareta, Mpanjakan’ny Jiosy”. Hitan’ny mpisoronabe fa tsy mahazo aina izany. Mpanjaka tsy manan-kaja, tsy manan-kery, tsy misy olona. Nanontany an'i Pilato izy ireo hoe: Tsy tokony holazaina amin'ilay famantarana fa Mpanjaka io anankiray amin'ny Jiosy io! Tsy afaka niova hevitra intsony anefa i Pilato. Ary vetivety dia nazava: Tsy izy ihany no Mpanjakan’ny Jiosy, fa Mpanjakan’izao tontolo izao koa.
Milaza mazava tsara ny hendry fa i Jesosy no Mpanjaka ara-dalàna. Ho avy ny fotoana hahafantaran’ny olona rehetra ny maha mpanjaka azy: “Tsy maintsy mandohalika eo anatrehan’i Jesosy ny olona rehetra, dia izay rehetra any an-danitra, na etỳ an-tany, na any ambanin’ny tany.” ( Filipiana ) 2,10 GNB).
Jesosy no Mpanjaka tonga teto amin’izao tontolo izao. Nitsaoka Azy ny olon-kendry ary indray andro any dia handohalika sy hanome voninahitra Azy ny olona rehetra.